Nyamavhuvhu 01, 2021
America Yoshora Kupondwa kweVatori veNhau muRussia
Mutungamiri weRussia VaVladimir Putin
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muRussia.
America inoti muna Chikunguru uno iri kurangarira nekupa ruremekedzo kuvatori venhau vaviri Natalia Estemirova na Paul Klebnikov avo Vakapondwa muna 2004 na 2009.
Vaviri ava vange vakazvipira mukuita basa ravo uye kurwira kodzero dzevanhu uye huori.
Klebnikov aive nemumwe mubereki kubva kuAmerica uye ainge ari mupepeti mukuru weForbes Russia Magazine rinotarisa nyaya dzezvehupfumi uye aizivikanwa nenyaya dzekufumura huori hwaiitwa nevemabhizimisi vemuRussia.
Musi wa 9 Chikunguru, 2004, Klebnikov akapfurwa kapfumbamwe muMuscow, guta guru reRussia panze pehofisi yake.
Estemirova aizivikanwa nenyaya dzekurwisa kodzero dzevanhu muGrozny guta guru reChechnya ,
Sangano raaishanda naro rinorwira kodzero dzevanhu reMemorial Human Rights Center rakaunganidza humbowo hwevanhu vaipambwa nekupondwa muChechnya muna 1999 apo vairirwira rusungunuko kubva kuRussia.
Mutori wenhau uyu akafumura nyaya dzekuurayiwa kwevanhu pasina kutongwa kumatare. Vamwe vevanhu ava vaipisirwa dzimba vamwe vachikandwa mujeri vasina mhosva.
Estemirova aishanda nemumwe mutori wenhau wekuRussia, Anna Politikovaskaya airwirawo kodzero dzevanhu nekushora hurumende ye Russia uye naiyewo akapondwa muguta reMuscow muna 2006.
Muna 2007, Estemirova akave mutori wenhau wekutanga kupihwa mubairo weAnna Politkovskaya Award unopihwa mudzimai anorwira kodzero dzevanhu gore roga roga.
Kusvika parizvino hapana ati asungwa achipomerwa mhosva dzekuponda Klebnikov na Natalia Estemirova.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeAmerica VaAntony Blinken mumashoko kuvatori venhau vanoti vanhu vakaronga nekuuraya vatori venhau ava havasati vaendeswa kumatare kunotongerwa mhosva dzavakapara uye mhirizhonga nekutyisidzira vatori venhau zviri kuenderera mberi muRussia.
America inoshora hurumende yeRussia zvikuru nekutyora kodzero dzevatori venhau uye inomira nevatori venhau vari kumbunyikidzwa ava.
VaBlinken vanoti Estemirova naKlebnikov vachagara mundangariro dzevakawanda kwemakore akawanda nehushingi hwavo mukurwira kodzero dzevanhu uye kurwisa huori muRussia.
Mashoko aya anotaura pamire hurumende yemuAmerica pane zviri kuitika muRussia.
America Yokurudzira Kuti Vatori veNhau Vasambunyikidzwa Vachiita Basa Ravo
Mugwaro ravakabudisa, mutevedzeri wemukuru wemapurisa eFederal Bureau of Investigation (FBI), VaWilliam Sweeney, vakati chikwata chinotsigirwa nehurumende yeIran chakaedza kubvuta mutori wenhau anogara muAmerica kuti vamudzorere zvechisimba kuIran.
Mutori wenhau uyu ndiMuzvare Masih Alinejad, akazvarirwa kuIran asi ave mugari wemuAmerica.
Kwemakore mazhinji, Alinejad akashanda semutori wenhau muIran, izvo zvakakonzera kuti hurumende yeIran ishatirwe naye pamusoro pezvaakange achibudisa pachena.
Kubva zvaatiza kubva kuIran muna 2009, Alinejad ave nemukurumbira pa’social media’, paanogara achishora kumanikidzwa kwevanhukadzi muIran kuti vashandise jira rekuvhara misoro yavo, kana kuti hijab.
MuAmerica, Alinejad anechirongwa chaanokokera panhephenyuro yeVoice of America.
Mutauriri wemuzinda weWhite House, Amai Jen Psaki, vakashora Iran mukuronga kubvuta Alinejad, vachiti Iran inoda kunyaradza manzwi eavo vanoshanda murugare muIran nekune dzimwe nyika.
Muongororo inonzi ‘2021 World Press Freedom Index’, yakaitwa nekunyorwa nesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau, reReporters Without Borders, Iran iri pachinzvimbo chezana nemakumi manomwe nechina (174) kubva munyika zana nemakumi masere (180) dzinobvumira vatori venhau kushanda vakasununguka.
Sangano iri rinoti, mukudzvanyirira vatori venhau, hurumende yeIran inoshandisa nzira dzechisimba, dzinosanganisira kuvabvunzurudza, kuvaisa mumajeri kana kuvauraya.
Sekutaura kwakaitwa negurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaAntony Blinken, Iran haisi iyo nyika yega inoshungurudza nekumbunyikidza vatori venhau.
VaBlinken vakati hofisi iri mubazi ravo yakabudisa zvayakawana muongororo yayakaita, inonzi Human Rights Report, inotatidza kuti vatori venhau vazhinji varikumbunyikidzwa nekuurairwa basa ravo.
Sangano rinorwira kuchengetedza kwevatori venhau, reCommittee to Protect Journalists, rinoti muna 2020, huwandu wevatori venhau vakaurayirwa kuita basa ravo hwakapetwa kaviri, richiti vatori venhau vazhinji vakaurawa muMexico neAfghanistan.
Sangano iri rinotivo huwandu hwevatori venhau vakasungirwa kuita basa ravo mugore ra2020 hwakasvika pahusina kumbosvika kubva zvavatanga kuongorora kunetseka pabasa kwevatori venhau, richiti vazhinji vevatori venhau vakasungwa muPeople’s Republic of China, Turkey, nemuEgypt.
Mushure mekuziviswa kuti Iran yakange yaedza kumubvuta muAmerica, Masih Alinejad akataura pfungwa dzevatori venhau pasi pose achiti haazoregi kuita basa rake, sezvo zvese zvirikuitika kwaari zvichimusimbaradza.
VaBlinken vanoti chokwadi chinobudiswa nevatori venhau chinobatsira mukuvaka hurumende dzejekerere, vachitizve vanokurudzira hurumende dzepasi pose kuti dzichengetedze vatori venhau uye kuti dzione kuti vatori venhau vanoita basa ravo pasina njodzi.
America Inotaura Nezvekushungurudzwa KweVatori Venhau
Chikunguru 05, 2021
America Inobatsira Dzimwe Nyika neMushonga weNhomba yeCovid-19
Pamusangano wakaitwa nenyika dzakabudirira dzeG7, nyika idzi dzakazvipira kubatsira dzimwe nyika nenhomba yeCovid-19.
Nhomba idzi, pamwe chete nezvakavimbiswa kubva muna Kukadzi 2021, zvichasvitsa rubatsiro rwemushonga rwese urwu pabhirioni remadhora mugore riri kuuya, America ichibatsira nehafu yemushonga iyi.
Mugwaro ravakabudisa, vatungamiri venyika dzeG7 vakati chinhu chekutanga chavanoda kuitira dzimwe nyika dzepasi rose kuona kuti mushonga wakanaka uye unoshanda uwanikwe nenyika dziri kubudirira sezvo kubaiwa nhomba kwavanhu vose pasi pano chiri chinhu chakanakira vagari vose pasi pano.
Mutungamiri weAmerica, VaJoe Biden, vakafara nekuzvipira kwakabvumiranwa uku, zvikurusei sezvo kwakauya mushure mekutaura kwavo kuti America ichatenga mishonga yePfizer/BioNTech inoita zviuru mazana mashanu kuti ipiwe kunyika dzinoita zana.
Sekutaura kwakaita VaBiden, America iri kutenga mushonga wekupa dzimwe nyika unopfuura wakambotengwa nenyika ipi zvayo.
VaBiden vakati, “Zviuru mazana mashanu zvemushonga wenhomba uyu zvichatanga kuendeswa kunyika dzakasiyana siyana mumwedzi waNyamavhuvhu gore rino. Zviuru mazana maviri zvemushonga uyu zvichaendeswa kuned zimwe nyika gore rino, uye zviuru mazana matatu zvichaendeswa mumwedzi mitanhatu yekutanga mugore ra2022.”
Kuzvipira kweAmerica kubatsira dzimwe nyika nemishonga yenhomba yePfizer inoita zviuru mamirioni mazana mashanu kuri kuwedzerwa pamusoro pe mishonga inoita mamirioni makumi masere akavimbiswa dzimwe nyika naVaJoe Biden, avo vakazvipiravo kubatsira nemari inoita mabhirioni maviri emadhora eku America ekubatsira sangano rinobatsira dzimwe nyika mukuwana mushonga wenhomba.
Chivimbiso chakaitwa nenyika dzeG7 chinoratidza kuti kubva muna 2020, nyika dzeG7 dzakazvipira kubatsira dzimwe nyika nemabhirioni maviri emushonga wenhomba.
Nyika dzeG7 dzakazvipiravo kubatsira dzimwe nyika mukugadzira mushonga wenhomba munyika dzayo dzichishanda neQuad Vaccine Partnership yeAmerica, Australia, India neJapan.
VaBiden vanoti zviri pachena kuti nyika dzeG7 dzinobvumirana kuti zvadzakavimbisa izvi hazvisi izvo zvese zvadzichaita, vachiti kubatsira uku kuchaenderera mberi kwenguva yakareba.
Editorial: America Inobatsira neMishonga Wenhomba